Yiphupho nje elingeke lifezeke ukulawula intengo kaphethroli, kusho ongoti. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Okwenzeka emazweni afana neRussia no-Ukraine kunesandla esikhulu kwintengo kaphethroli
Yiphupho nje elingeke lifezeke ukulawula intengo kaphethroli, kusho ongoti. USLINDILE KHANYILE uyabika
AKUKHO okutheni okungenziwa wuhulumeni ukulawula intengo kaphethroli ngoba ingxenye enkulu yayo yilena engekho ezandleni zawo njengoba kuya namandla erandi uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Kunjalo nje mancane namathuba okuthi ayeke ukubamba intela exhasa iRoad Accident Fund (iRAF) neSouth African National Roads Agency (iSanral).
Usho kanje usomnotho nongummeli wasemajajini uSolwazi uBonke Dumisa ngenkathi ephawula ngenkulumo kaNgqongqoshe wezeziMali u-Enoch Godongwana. Ethula iSabelomali ngesonto eledlule, uGodongwana uthe bayabonisana noNgqongqoshe wezokuMbiwa Phansi namaNdla uMnu uGwede Mantashe ngendlela okuklanywa intengo kaphethroli ngayo.
Usomnotho nommeli wasemajajini uSolwazi uDumisa uthi yiphupho ukuthi kungalawulwa ukunyuka kwentengo kaphethroli
NoMantashe ukugcizelele loku ekuqaleni kwaleli sonto. NgoLwesibili intengo kaphethroli inyuke ngoR1.46c ilitha, kwathi elikadizili lona lanyuka ngoR1.44c kanti upharafini wona ukhuphuke ngoR1.21c ilitha.
UDumisa uthe yipolitiki nje ekhulunywayo futhi kunikwa abantu ithemba elingekho.
“Kuncane kakhulu uhulumeni angakwenza ngendlela okubalwa ngayo intengo kaphethroli nodizili. Kulo R21esiwukhokhayo uma sifaka uphethroli, wuR6 kuphela imali ebanjwa kuleli zwe. Kuleyo mali kunengxenye eya kwiRAF. Ngiwummeli nje kodwa nginamahloni ngenkohlakalo eyenzeka kulesiya sikhwama yenziwa abammeli futhi uhulumeni uma eke wathi uyazama nje ukwenza ushintsho bamyisa manje enkantolo kanti-ke kulula nokuhlula uhulumeni enkantolo.
“Enye ingxenye (kaR6) isetshenziselwa ukulekelela abanikazi bamagaraji ngoba abavumelekile ukwengeza eyabo imali entengweni kaphethroli ukuze benze inzuzo bese kuthi enye iye kwiSanral ukuze izokwazi ukunakekela imigwaqo,” kuchaza yena.
Ingxenye enkulu yentengo kaphethroli ihambisana nokuthi uwoyela ongahluziwe (i-brent crude oil) ubiza malini ngaleso sikhathi. Kusukela kuqale impi phakathi kweRussia ne-Ukraine intengo yalo woyela iqongile yadlula ku$100 umphongolo njengoba izolo lishone iwu$114 umphongolo. Lokhu kungenxa yokuthi lawa ngamanye amazwe amakhulu kwadayisa uwoyela nokolweni.
Ngokwemibiko yabezindaba, iFinancial and Fiscal Commission, ikhomishini eluleka iPhalamende neziShayamthetho ngezindaba zemali, isikhiphe isexwayiso esithi le mpi izophazamisa ukukhula komnotho waseNingizimu Afrika nobekulindeleke ukuthi kusize ukuvuselela umnotho owiswe wubhubhane iCOVID-19.
“Njengoba kade siwubona nje uphethroli kade wehla eminyakeni emibili edlule yingoba ngo-2020 yake yehla intengo kawoyela ongahluziwe yaze yaba wu$25 umphongolo. Nakhona kodwa uma wehla, kunenani okungafanele ube ngaphansi kwalo,” kwengeza uDumisa.
Intengo kaphethroli inomthelela emananini okudla, nokuyizinto eziba nomthelela emandleni emali. Amanani okudla asevele anyukile kanti kungekudala ugesi uzonyuka ngo-9.61%.
UMnu u-Owen Nkomo, isikhulu esiphezulu seNkunzi Wealth Group, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kuyeke ukuba wumthwalo kahulumeni ukunxephezela abantu abalimala ezingozini zomgwaqo. Uthe kungasiza ngisho ukuthi ame ukuxhasa iRAF okwesikhashana.
UNkomo, isikhulu esiphezulu seNkunzi Wealth Group, uthi uhulumeni akayeke ukuxhasa iRAF
“Kodwa-ke ngicabanga ukuthi lena ngenye yezindlela ezilula uhulumeni angenisa ngazo imali,” kusho uNkomo.
Ngokusho kocwaningo olubuyekeza amanani okudla, iHousehold Affordability Index, ukudla bekubiza okungenani uR4 335.70 ngoFebhuwari kulo nyaka. La manani anyuke ngoR354.52 noma u-8.9%, esuka kuR4001.17 ngoFebhuwari ka2021.
Lolu cwaningo lubheka amanani okudla ezitolo zokudla eziwu-44 nasemabhusha awu-30 eGoli, eThekwini, eKapa, eMgungundlovu naseSpringbok, eNorthern Cape.
UNkomo uthe abantu ababuyekeze indlela abasebenzisa ngayo imali, babheke izitolo ezishibhile kunabazisebenzisayo futhi bazame ukukhokhela izikweletu nokugwema ukwenza ezintsha.
“Kade ngibuka nje ukuthi sinomakhelwane wami izingane zethu zifunda esikoleni esisodwa futhi sobabili siyazihambisela ngezimoto ezimbili. Asikho isidingo saloko, singasebenzisa imoto eyodwa noma sihlanganyele ekukhokheleni u-Uber. Ngezinye izinto lezo okufanele abantu bazibheke,” kweluleka uNkomo.
Owaqala ukukhipha amangwevu esemncane ethungela umshado wenza ezibukwayo kwimfashini. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
IHHOVISI loMcwaningimabhuku-Jikelele eNingizimu Afrika seliqoke uMnu uPolani Sokombela ukuthi abe yi-chief financial officer. USokombela uthatha izintambo kuNkk uBongi Ngoma, oseyinhloko yeNational Audit kuleli hhovisi. USokombela uyi-chartered accountant. Wafika kuleli hhovisi ngo-2007 eyithwasa, ngaphambi kokuphatha izikhundla ezihlukene.